Kiiska Kaarka Apple ee Milyaneerada | Wararka IPhone
Gacan dahab ah oo Apple Card ah oo loogu talo galay milyaneerada. Haddii aad tahay Neymar, Cristiano Ronaldo, Fernando Alonso ama ganacsade Ruush ah, waxaad ku jirtaa nasiib: waad is iibsan kartaa naftaada dabool kaarkaaga cusub ee Apple ee qiimaha hooseeya ee ku saabsan kunka Euro.
Kaarka amaahda ee Apple oo toddobaadyo ka hor laga bilaabay Maraykanka, ayaa mar horeba ku sii socda waddada. In kasta oo ay Apple u qorshaysay kaarkan in ay si caadi ah u adeegsato, iyada oo la adeegsanayo shaqada Apple Pay ee iPhones iyo Apple Watch, runtu waxa ay tahay in dadka haysta kaadhka titanium-ka ay wataan oo ay la baxaan markay doonaan.
Waqtiga gaaban ee kaarkani kujiray boorsooyinka Mareykanka, waxaa horey ujiraa faallooyin badan oo kusaabsan xirashada kaarka la sheegay. Aad u qabow, titanium, laakiin jilicsan. Waxay umuuqataa inay si fudud u sii xumaaneyso, oo lagu xoqayo boorsooyinka maqaarka, ama dharka jooniska, tusaale ahaan.
Daboolayaa Kaadhka Apple, sidii oo ay moobiil tahay
Noocyo kala duwan oo dabool ah oo loogu talagalay kaarka Apple ayaa isla markiiba ka soo muuqday suuqa, sida haddii ay tahay iPhone. Tusaale ahaan, sumadda Kerf waxay leeyihiin laga bilaabo $ 39. Waxaa lagu sameeyaa alwaaxyo kala duwan, waa la shaqsiyeyn karaa, waxayna ku habboon yihiin dhammaan noocyada kaararka deynta.
Ilaa hadda, waxaan ku jirnaa xadka caadiga ah. Looma baran in aan ilaalino kaarka amaahda, waxaa loo bartay in aan qaadno kiis aan ku keydino dhowr kaar, caag ama bir, sida boorsada jeebka, laakiin ma ahan kiis aan ku ilaalinayno hal kaar.
Waxa aan sidaa u sii badnayn waa in la helo kiis xoogaa gaar ah: In ka badan kun Euros waxaad ka iibsan kartaa dacwad shirkadda Gray dahab kaarkaaga Apple, iyo kun kale, kiiska ku habboon iPhone-kaaga.
Haddii aad xiiseyneyso inaad aragto daboolka la yiri, dhadhankeyga, sanka xun, waxaad ku arki kartaa dib-u-eegidgan iJustine.
Waa macquul inaan aragno Neymar oo midkood ... laakiin wuxuu horeyba u xaqiijiyay in lacagta kaliya aysan farxad kuu aheyn ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Gacan dahab ah oo Apple Card ah oo loogu talo galay milyaneerada
Soosaarista suurtagalka ah ee TV-ga Apple-ka ka awoodda badan ayaa lagu xantaa